Okuqukethwe Ngeke Kuguqulwe Ngaphandle Kokubizelwa Esenzweni | Martech Zone
Inyanga ngayinye Martech Zone izokhiqizela imikhondo emincane kakhulu yemikhombandlela ye- uxhaso, ukukhangisa futhi Consulting amathuba. Njengoba isiza siqhubeka nokukhula sithandwa, noma kunjalo, besingaboni ukwanda okulandelayo kwemikhombandlela. Ekugcineni benginayo - ngihlaziye isiza futhi ngabuyekeza lapho izingcingo zethu zenzelwa khona. Kuyinto esiyinaka kakhulu namakhasimende ethu kepha ngangihlulekile ukubuyekeza amasu ethu okwenziwa kahle kokubizelwa ezenzweni.
Kukhona ukubekwa okujwayelekile oku-3 kokubizelwa kwakho esenzweni kunoma yiliphi ikhasi elinikezwe kusayithi lakho:
Ukusakaza ngaphakathi - lena yi-CTA enamandla kakhulu, ukubeka isixhumanisi, inkinobho, noma isithombe esifanele okuqukethwe kwakho kuzoguqula labo abanentshisekelo abafunda okuqukethwe owabelane ngakho.
Okungeziwe - uzobona amanye ama-CTA ashukumisayo futhi amile asondele kokuqukethwe kwethu. Senze isiqiniseko sokuthi basondelene nokuphakelayo kwethu kwe-RSS, indawo yethu ephathekayo nezinhlelo zethu zokusebenza zeselula, futhi.
Site - lawa ngama-CTA ajwayelekile aqondene nemikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yibhizinisi lakho. Njengoba abantu beqhubeka nokufunda okuqukethwe kwakho, abaningi bazoba nelukuluku lokuthi ungabasiza kanjani ukubasebenzisela… ama-CTA abanzi esayithi afana nezikhangiso zonhlokweni nonyaweni.
Okuhlukile, yiqiniso, amakhasi akho okufika. Amakhasi okufikelwa kuwo kufanele abe lapho uya khona - hhayi indawo yamanye ama-CTA nezinketho. Uma ubheka ikhasi kusayithi lakho, ngabe amakhasi akho akhiwe ngokuqinile kokubizelwa ezenzweni ekusakazweni, okuseduze, nakuyo yonke indawo?
Asikaqedi okwamanje, kepha sandise inani lethu lokuhola lisuka ku- ~ 5 ngenyanga lize ngaphezulu kokuhola okungu-140 ngenyanga. Lokho kungukuthuthuka okungekho eshadini! Futhi ngaphandle kwethu ukushintsha ivolumu yabantu abavakashela isiza. Isayithi efanayo, okuqukethwe okufanayo ... kepha a Ukuthuthuka okungu-2,800% kokuguqulwa ngokuqinisekisa nje ukuthi kukhona ukubizelwa esenzweni kukho konke okuqukethwe okuqukethwe esikukhiqizayo. Lezi akuzona izikhangiso ezibhengeza ubuso bakho ezicwayiza… ziyizinkinobho ezilula, ihluzo noma izixhumanisi zombhalo.
Ukuthola ukubizelwa esenzweni ngaphakathi kokuqukethwe kwakho nesayithi kufanele kube lula. Izithameli zakho akufanele zibuze ukuthi iziphi izinyathelo ezingase zizenze ngokulandelayo, qiniseka ukwenza batshele okufanele bakwenze ngokulandelayo. Uma ubatshela, bazofika.